Nagarik Bazaar - मेगापिक्सलको अर्थ के ? धेरै मेगापिक्सलको महत्त्व के ?
क्यामराको रेजोलुसन जनाउनका लागि प्रयोग हुने शब्द हो मेगापिक्सल । तर यस निकै प्रचलित शब्दलाई स्मार्टफोन क्यामराको प्रयोगकर्ता देखि डी एस एल आर प्रयोगकर्तासम्म धेरैले नबुझी नै प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
मेगापिक्सलको अर्थ हो १ मिलियन वटा पिक्सल । १ मिलियनको अर्थ हो १० लाख । यसर्थ, एक मेगापिक्सलको अर्थ हो १० लाख वटा पिक्सल । यसै गरि ८ मेगापिक्सलको क्यामराले ८० लाख वटा जति पिक्सल भएको तस्विर खिच्न सक्छ । ।
पिक्सलको अर्थ के ?
पिक्सल भन्ने शब्द “पिक्चर इलिमेन्ट“ को छोटो रुप हो जसको अर्थ हो तस्विरको तत्व । पिक्सललाई डिजिटल ग्राफिक्सको आधारभूत कुरा मान्न सकिन्छ । कुनै पनि डिजिटल तस्विरमा हुने एउटा थोप्लोलाई पिक्सल भनिन्छ । एउटा पिक्सलले एकपटकमा एकै रंग देखाउने गर्दछ । यस्तै रंगले भरिएका थोप्लोहरू मिलेर नै हामीले डिजिटल संचारमा हेर्ने तस्विरहरू बनेका हुन्छन् - चाहे सो स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा होस् या कम्प्युटर मोनिटरको डिस्प्लेमा ।
मेगापिक्सलको पछाडी नलागौं
अहिलेको समयमा स्मार्टफोन निर्माताहरूले मेगापिक्सल धेरै देखाएर उपभोक्ता माझ कुनै एक स्मार्टफोन क्यामरालाई राम्रो हो भन्ने भान पार्न खोजिरहेका छन्, जुन धेरै हदसम्म गलत हो । त्यसैले उपभोक्ताले पनि मेगापिक्सलको पछाडी नलाग्नु र स्मार्टफोन वा कुनै पनि डिजिटल क्यामरालाई मेगापिक्सलको सट्टा अन्य गुणस्तरबाट मापन गर्नु उचित हुन्छ ।